Typhoon Lan na-eru nso Japan | Netwọk Mgbasa Ozi
Ndị Japan na-akwado maka mbata nke ajọ ifufe lan, nke iri abụọ nke oge na Pacific, nke ruru ụdị 2. Nke a, nke dị ugbu a na Oké Osimiri Philippine, na-aga n'ihu na 15 kilomita kwa elekere na ụzọ mgbago ugwu, na-aga n'àgwàetiti nke mba Japan.
Lan, nke na-akwado ifufe nke kilomita 167 kwa awa, ga-abata na agwaetiti na Sọnde, ụbọchị a ga-eme ntuli aka.
1 Kedu ihe trazọ Lan ga-abụ?
2 Kedu mmebi ọ nwere ike ịkpata?
Kedu ihe trazọ Lan ga-abụ?
Foto - Cyclocane.es
Lan bụ ajọ ifufe nke hibere n'ebe ọwụwa anyanwụ Taiwan na October 16, 2017. Echi Satọdee a na-atụ anya na ọ ga-abata na Okinawa, wee gaa n'ihu na mpaghara ugwu ọwụwa anyanwụ mgbe ọ na-efunahụ ike wee bụrụ oke ifufe. N'ikpeazụ, na Tuesday, a kwenyere na ọ ga-esi na mba Japan pụọ.
N'ime ihe onyonyo abuo a o gha edo anya karie:
Omume Typhoon Lan nwere ike ime na Sọnde, Ọktoba 22:
Ebe enwere ike ibugharị Typhoon Lan na Tuesday, October 24:
Kedu mmebi ọ nwere ike ịkpata?
Nsonaazụ nke Typhoon Lan nwere ike ịdị oke njọ. Japan na-akwadebe mgbe ị na-eche ọbịbịa nke oke mmiri ozuzo na ifufe, nke nwere ike ịdị njọ karịa ka ha dị. N'ọtụtụ Kyushu, Shikoku na Honshu ọ nwere ike imebi osisi na ihe owuwu, yana ịkpata ọtụtụ ọpụpụ ike.. Ọzọkwa, idei mmiri na ebili mmiri ga-eme n'ụsọ Oké Osimiri Pasifik nke agwaetiti ndị a.
Ọ bụ ezie na oge ajọ ifufe nke Atlantic abụrụla nke kachasị kemgbe, Pacific dịtụ nwayọ ruo n'oge na-adịbeghị anya. N’abalị iri na isii n’ọnwa Ọktoba, ọ bụ naanị ọkara nke ajọ ifufe ndị a na-enwe n’ebe okpomọkụ eburu; n'ime ha, enweela naanị oke ajọ ifufe: Noru, na njedebe nke July.
Anyị ga na-agbaso Typhoon Lan nke ọma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ajọ Ifufe » Typhoon Lan na-erute Japan
Orionid meteor shower, otu n'ime ihe kachasị mma n'afọ
A ga-eme Summit Summit ọhụrụ na Bonn